Wasiir ka tirsan DF oo Jay Bahdur iyo ururo ku eedeeyey ‘shirqool la rabo in lagu dilo’ | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Wasiir ka tirsan DF oo Jay Bahdur iyo ururo ku eedeeyey ‘shirqool...
Bahdur iyo hay’adda Giato ayaa baaritaano ku wada koox saraakiil Soomaali ah kuwaas ay ku tuhunsan yihiin iney gacan-siinayeen shirkad NEFCO oo muddo soddon sano ah ku jirtey ka ganacsiga Kaluunka.
Wasiiru dowlaha Wasaarada Maaliyada ayaa, sida Jariidada Nation daabacdey, dacwadiisa ku gudbiyey in Jay Bahdur iyo Giato ay jabsadeen emeil-kiisa islamarkaana kala baxeen xoggo muhiim ah kuwaas oo ay u isticmaaleen warbixintooda, waxaana uu doonayaan in Maxkamada sare ee Kenya soo faragliso. Xayir ma uusan xusin sababta Soomaaliya dacwadaan uga xereyn waayey.
Inta badan saraakiisha lagu xusey warbixinta “Giata” iyo xiriirka ay leeyahiin shirkada la yiraahdo “China Overseas Fisheries Association” kama aysan jawaabin eedeymahaas. Isku dayo la doonayay in xiriir toos ah lagula sameeyo ayaanan gabi ahaanba guuleysan.
Previous articleGuddiga doorashada Galmudug oo doortay guddoon